युवतीहरु खबरदार ! यस्ता केटाहरु हुन्छन् धोकेबाज : सफा मन हुनेले मात्र सेयर गर्नुहोला ! - Chothale
प्रायः युवतीहरू मीठो बोल्ने केटाको कुरा छिट्टै पत्याइहाल्छन् र कालान्तरमा धोका खान पुग्छन् । तर अलिकति दिमाग लगाउने हो भने धोके’बाज केटाको बारेमा थाहा पाइहालिन्छ । तल लेखिएका कुरा पढेर तपाईं धोकामा पर्नबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ । प्रायः केटाहरूले युवतीलाई भेट्नेबित्तिकै आफ्नोपन देखाउँदै मीठोमीठो कुरा गर्न थालिहाल्छन् ।
कति राम्री भन्दै तारिफ गर्न थालिहाल्छन् । अनि युवतीलाई कस्तो राम्रो केटो रहेछ भन्ने लाग्छ । तर वास्तवमा ऊ राम्रो मान्छे नहुन पनि सक्छ । फ्ल’र्ट गर्न माहिर र धो’कबाज चरित्र भएका युवकहरू मीठो बोल्न माहिर हुन्छन् । मीठो कुरामा फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर युवतीलाई पट्ट्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ । धेरै पुरुषको मान्यता के हुन्छ भने महिलासँग नजिक हुने भनेकै शारीरिक सम्बन्ध बनाउनका लागि हो । अनि यस्ता पुरुषले महिलासँग से’क्स सम्बन्धी कुरा गर्न खोज्छन् ।
गलत नि’यत भएका पुरुषको रहस्यमयी व्यक्तित्व हुन्छ । यस्ता मान्छे मोबाइलमा झुण्डिएर बसेका देखिन्छन् तर उनीहरूको इनबक्स हेर्नुभयो भने प्रायः खाली नै हुन्छ । धोका दिने प्रवृत्ति भएको मान्छे आफ्ना सबै कुरा लुकाएर राख्न चाहन्छन् । कुनै पुरुषले ज्यादै फ्लर्ट गर्न थाल्यो भने महिलाहरू सावधान भइहाल्नुपर्छ । त्यस्तो मान्छेले तपाईंसँग मीठो कुरा त गर्छ तर तपाईंले भविष्यको कुरा झिक्नुभयो, जिम्मेवारीको कुरा झिक्नुभयो भने टार्न खोज्छ वा भाग्छ ।
यस्तो व्यवहार देखायो भने त्यो मान्छेबाट टाढै रहनु ठीक हुन्छ । तपाईंसँग सम्बन्धित कुरामा लापरवाही देखाउने, तपाईंका महत्वपूर्ण दिनहरू, जस्तै जन्मदिन, बिर्सने अनि जे पायो त्यही बहाना बनाउने मान्छे पनि धोकेबाज हुन्छन् । यस्तालाई भरोसा गर्नु तपाइँको जिन्दगीका लागि खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले बेलैमा होस् पु¥याउनुहोस् र सक्दो सेयर पनि गर्नुहोस्…..
यो पनि पत्याउनुहुन्छ ? यि राशि भएका युवतिले पनि सधै प्रेममा धोका दिन्छन् – ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुनै पनी ब्यक्ती चरित्र स्वभावको बारेमा त्यस ब्यक्ती कुण्डलीको सहायताले उस्को बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसै त हाम्रो देश नेपालमा पनी हिन्दु धर्मका अनुसार विवाह अगि नै केटा र केटीको कुण्डली अनुसार उनिहरूको भाग्य कुण्डली मिलाउने गरिन्छ ।
बैवाहिक जिवनमा बाधिन लागेका केटा र केटी कुण्डली बाट यो पत्ता लगाउन सकिन्छ कि भविष्यमा उनिहरूको वैवाहिक जिवन कस्तो हुनेछ भनेर । तर के तपाईलाई थाहा छ कि ज्योतिष शास्त्रका अनुसार, केही राशिहरूको महिलाहरू यस्ता हुन्छन्, जो सधैँ प्रेममा धोका दिने गर्दछन् । यसकारण यहाँ केही यस्ता राशिको बारेमा चर्चा गरिएको छ, जुन राशिको महिलाहरूले प्रेममा बढी धोका दिने गर्दछन् ।
मिथुन राशि : मिथुन राशिको मानिसहरूको बारेमा बढीजसो सबै राशिको एक मात्र राय हुन्छ कि यस राशिको महिलाहरू प्रेममा निकै चाँडो पर्दछन् । यस राशिको बारेमा भनिएको छ कि यदि कसैले यिनीहरूसँग केवल एक पटक मात्र हाँसेर कुरा गरेमा यी राशिका महिलाहरू उनीहरूको प्रेममा पागल हुने गर्छन् । जसको अर्थ यो हुन्छ कि यिनीहरू एक तर्फी प्रेममा निकै चाँडो पर्छन ।
यसैकारणले यस राशिको अधिकांश मानिस प्रेममा आफ्नो प्रेमीप्रति विश्वासिला सावित हुँदैनन् । कर्कट राशि : हुनत, धेरै पटक देखिएको छ कि कर्कट राशिको मानिसहरू आफ्नो प्रेमीप्रति पुर्ण विश्वासिला हुन्छन् तर यदि यिनीहरूलाई कोही अरू मन परेमा कुनै पनि किसिमले मौका हातबाट फुत्किन दिँदैनन् र यसै कारणले यिनीहरू आफ्नो प्रेमीलाई चाँडो धोका दिन सक्छन ।
कन्या राशि : कन्या राशिको बारेमा ज्योतिषको भनाई छ कि कन्या राशिको महिलाहरू आफ्नो प्रेमीसँग कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्दैनन् र यसकारण यिनीहरू आफ्नो प्रेमीबाट यहि अपेक्षा राख्दछन् ।यस राशिका मानिसहरू खुला विचारका हुन्छन् । यसकारण यस राशिको मानिसको गलत फाइदा पनि उठाउने गर्दछन् ।
कुम्भ राशि : कुम्भ राशिको मानिसको बारेमा भनिएको छ कि यी मानिसहरू अरू भन्दा बढी आकर्षक देखिनका लागि निकै मेहेनत गर्दछन् । यदि यी मानिसलाई कसैले वेवास्ता गरेमा यिनीहरू चाँडो रिसाउने गर्दछन् । आफूलाई अरू भन्दा बढी राम्रो देखाउनका लागि यिनीहरू कुनै पनि हद सम्म जान सक्छ । यसकारण प्रायजसो यहि कारणले यिनीहरू आफ्नो प्रेमीलाई धोका पनि दिने गर्दछन् ।
यसैतै यि राशी भएका ब्यक्तिसँग मायाको भकारी नै हुन्छ, त्यसैले उनीहरु माया गर्ने मनको खोजीमा डुलीरहन्छन् : मिथुन राशि – यस राशिका व्यक्ति एकदमै छिटो प्रेममा पर्ने गर्छन् । कसैको कुनै पनि कुरा राम्रो लागेमा आकर्षित भइहाल्ने र भविष्यबारे सपना देख्न थाल्छन् । यद्यपी, जति चाँडो प्रेममा पर्छन्, त्यति नै छिटो प्रेमको भूत पनि उत्रिहाल्छ ।
कर्कट राशि – प्रेममा विश्वाससिलो, सम्बन्धप्रति इमान्दार र प्रेमको अनुभूति गराउँन आउँछ यी राशिका व्यक्तिलाई । यी राशिका व्यक्ति निक्कै संवेदनशील हुन्छन्, त्यसैले जो राम्रो व्यवहार गर्छ, सम्भव त ऊसलाई मन पाराउँन थाल्छ । कन्या राशि – मनमा कुरा नलुकाउँने हुन्छन् र अर्को व्यक्तिबाट पनि यही आशा राख्छन् । यही बिशेषतालाई अरुले गलत रुपमा लिइदिने गर्छन् । त्यसैले, जो कोही पनि उसको कुरामा सहमति देखाउँछ, ऊ९कन्या राशि० भावनात्मक रुपले तिनैसँग जोडिन पुग्छन् ।
कुम्भ राशि – यी राशिका व्यक्ति अरुको आकर्षणमा रहिरन मन पराउँ५न् । यस्तो अवस्था यदि अरु व्यक्तिले बेवास्ता गरेमा उनिहरुलाई निक्कै रिस उठ्ने हुन्छ । त्यसैले, जो यो राशिका व्यक्तिप्रति आकर्षित हुन्छन्, आफ्नो बनाएर छाड्छन् । मीन राशि – यी राशिका व्यक्ति प्रेमको सम्बन्धमा निक्कै अनौठा हुन्छन् । जुनसुकै अवस्थामा आफूलाई सहज बनाओस् भन्ने चाहान्छन् । यद्यपी, यी राशिका व्यक्तिको अनौठो स्वाभावले मानिस चाँडै आकर्षित ह्न्छन् ।
जीवनशैली, मनोरन्जनमीठो बोल्ने केटा, युवती